फिन र Swirly स्पिन | शीर्ष स्लट साइट | Mobile Casino Online | £€$800 Deposit Bonus :)
फिन अनि द Swirly स्पिन एक छ अनलाइन स्लट खेल एउटा आइरिस लोकगीत विषय छ. NetEnt द्वारा सिर्जना, यो भिडियो स्लट यस्तो बारहरू रूपमा परिचित प्रतीक आउँछ, Bells, घोडाको टाप र चार-पात clovers. यो पनि एक क्लस्टर आफ्नो नियमित payline सिस्टम भन्दा ठाउँमा विजेता सिस्टम Pays छ. यी सबै र धेरै एक जाँच गर्न पर्छ यो अनलाइन स्लट एक बनाउन. तपाईँले तल समीक्षा यो स्लट बारे थप विवरण प्राप्त गर्न सक्छन्.
एक क्लस्टर Pays अनलाइन स्लट खेल
तपाईँ सँग छ5पङ्क्ति र5यो अनलाइन स्लट खेल मा रील. बताइएझैं कुनै सक्रिय payline उपलब्ध छन्, त्यसैले तल दायाँ र माथि बायाँबाट WINS तपाईं आसन्न रील मा समान प्रतीक को एक क्लस्टर भूमि गर्दा कमाएको छन्. फिन अनि द Swirly स्पिन प्रत्येक स्पिन लागि 10p एक टोकन संग खेलिन्छ. यो एक कम जोखिम gamblers सपना छ, तथापि, तपाईं तपाईँको रूपमा उच्च रूपमा £ 200 प्रति स्पिन बाजी तपाईंको प्रयासमा लागि ठूलो पुरस्कार चाहनुहुन्छ भने.
बोनस सुविधाहरू उपलब्ध आधार खेलमा
यो अनलाइन स्लट खेल को आधार खेलमा, तपाईं चार अंधाधुंध पहुँच बोनस सुविधाहरू खेल्न प्राप्त गर्न सक्छन्. यी अर्थात् रहेका "ड्रागन नष्ट", को "जादू रूपान्तरण", "आइरिस किस्मत" र "Starfall Wilds".
ड्रैगन संग नष्ट, तपाईं exploding एक विजेता क्लस्टर भाग प्रतीक छ. यी प्रतीक त नयाँ र आषा द्वारा स्थानापन्न गरिनेछ, नयाँ क्लस्टर WINS गठन गरिनेछ र चक्र जारी. जादू रूपान्तरण हृदय र Spades हुनेछ (कम मूल्य प्रतीक) उच्च मान संग प्रतीक मा एक क्लस्टर मा गठन र आफ्नो क्लस्टर जीत आय बढाउने गर्न.
को आइरिस किस्मत आफ्नो क्लस्टर WINS बढाउने दुवै ठाडो र तेर्सो आसन्न लाइनमा ठाउँमा समान प्रतीक हुनेछ. अर्कोतर्फ, को Starfall जंगली सुविधा रील मा धेरै पाँच रूपमा स्टार जंगली प्रतीक जंगली सहायता प्राप्त क्लस्टर WINS मद्दत हुनेछ.
यो अनलाइन स्लट खेल आइरिस-THEMED प्रतिक
यो अनलाइन स्लट खेल को प्रतीक आइरिस-THEMED छन्. तपाईं Spades छ, हृदय, acorns, भाग्यशाली घोडाको टाप, चार-पात clovers र माणिक. को रील मा पाँच माणिक संग, तपाईं एक 50X खम्बा गुणक कमाउन सक्नुहुन्छ. उल्लिखित रूपमा एक तारा जंगली छ र यसरी प्रतीक एक प्रमुख स्क्याटर प्रतिमा बाट अलग अन्य प्रतीक प्रतिस्थापन गर्नेछ.
यो भिडियो स्लट एक सुखद पृष्ठभूमि दृश्य छ र ग्राफिक्स उत्तिकै ठूलो हो. को क्लस्टर सिस्टम तपाईं एकदम सभ्य भुक्तानी कमाउन सक्नुहुन्छ Pays र WINS आधार खेल उपलब्ध सुविधाहरू लगातार साथै विशेष कमाएका गर्न सकिन्छ.